क्वारन्टीनमा प्रहरी जवान नाचेको भिडियो भयो भाइरल (भिडियो सहित)
July 8, 2020 10136
कोरोनाको कहरले लामो समयस’म्म बन्दाबन्दी हँुदा नागरिकको जनजीवन कष्टप्रद बन्यो । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलका’रखाना, सवारी’साधन, बजार ठप्प हुँदा नागरिकले बन्दा’बन्दीको समयमा निकै समस्या भोग्न बाध्य भएका थिए । अहिले विस्तारै बन्दाबन्दी खु’कुलो हँुदै जाँदा दैनिक जीवनया’पन सहज बनेको छ ।
नागरिकहरु आ–आफ्नै पेशा तथा व्यव’सायमा विस्तारै फर्कन थालेका छन् । आयस्रोत जुटा’उने तथा जीविकोपार्जन कार्यमा नागरिक’को दिनचर्या बित्ने गरेको छ । श्रमिक मजदूर सडक तथा भवन निर्माण, सडक, नाली निर्माणल’गायतका विभिन्न कार्य’मा सक्रिय बन्न थालका छन् ।
बन्दाबन्दी खुकुलो हुन थालेपछि लामो सम’यसम्म ठप्प रहेका व्यापार व्यवसाय पुनःसुचारु भएका छन् । तीन महिनासम्म बन्द रहेको व्यवसाय वाताव’रण खुकुलो हँुदै गएपछि सुचारु ग’रिएको नमस्ते होटल पाल्पाका सञ्चालक कमल पाण्डे’य बताउनुहुन्छ ।
“वाताव’रण खुकुलो बन्दै जान था’लेपछि ग्राहकले नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेपछि पुनःसुचारु गरियो, व्यापार पहिलेको तुलनामा अत्यन्तै कम छ तर दिनप्रतिदिन विस्ता’रै बढ्दै भने गएको छ” ।
यसै क्रम’मा दाङ देउखुरी घर भएका प्रहरी जवान जयप्र’काश चौधरी क्वारन्टीनमा नाचेको भि’डिओका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छन्। पाल्पास्थित एउटा विद्यालयमा बनाइ’एको क्वारन्टीनमा सुरक्षार्थ खटि’एका बेला उनी यसरी नाचेका हुन्।
क्वारन्टी’नमा बस्दा वाक्क लागे’को बताउने मानिसहरूकै आग्रहमा ‘साउन्ड सिस्टम’ जुटाइदिएको र उनीहरूकै आग्रहमा आफू नाचे’को उनले बताए। चौधरी सात बर्षदेखि नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् ।
उनि भन्छन्, क्वारन्टीनमा मनोरञ्जन र खेलकुद निकै आवस्यक रहेको हुन्छ । यो क्वारन्टीनमा भारत’बाट फर्किएका मानिसह’रुलाई राखिएको थियो । आफु नाचेको भिडियो धेरैले हेरेर भाइरल हुँदा निकै खुसि ब्याक्त गरेका छन् । – ताजा खबर
हेर्नुहोस् कमल परि’यारले बनाएको यो सामग्री….
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्…
Nextकसले भन्यो हाम्रो राजेश महानायक होइन भनेर? उहाँ महानायकनै हो (भिडियोसहित)
बच्चन परिवारकी बुहारी ऐश्वर्यासँग संजय दत्तको थियो यस्तो सम्बन्ध
घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु,होस्
सबै-भन्दा बढी रुचाइएकी मोडल करिश्मा ढकालको एकदमै रमाइला टिक-टक (भिडियो सहित)
लोकल र’क्सी र गाँ जा’ बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने अभियानमा यी सांसद दम्पती…!
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (114977)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (111133)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (97844)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (92692)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (91590)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (91497)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (85767)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81155)
यी जोडीको टिकटकमा अनौठो हर्कत, एकाएक भाइरल बन्यो भिडियो (भिडियो सहित) (74095)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (73390)
एउटै नम्बरका दुई बाइक: एक चालक प्रह’री कार्यालयमा, अर्का’लाई खोज्दै प्रह’री
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, एकाएक टिक-टकमा भाईरल (भिडियो सहित)
अमिताभ बच्चन, अनुपम खेरसहित बलिउडका यी अभिनेताले नेपाली ढाकाटोपी लाउनुको कारण यस्तो रहेछ
मुस्ताङमा हिन्दी फिल्म छायाँकनमा आएका बेला अमिताभ बच्चनको कार घेरेपछि….
‘हनि ट्रयाप’ युवक फसाउने भावना तामाङ जे’ल चलान